Iyini ukuthuthukisa injini yokusesha nokuthi isebenza kanjani?
Iyini ukuthuthukisa injini yokusesha? Ngencazelo, i-SEO iyiqoqo eliphelele lamasu okuhloswe ngalo ekuthuthukiseni inani kanye nekhwalithi yephepha lakho lekhasi, elivela emiphumeleni yosesho ephilayo.
Ziyini amaphuzu ayisihluthulelo se-SEO? Ukuze uqonde ukuthi yini ukuthuthukisa injini yokusesha, ngiphakamisa ukuba incazelo yangaphambilini ihlukaniswe zibe izingxenye zayo ezintathu eziyinhloko.
Ngokusobala, lapho uthola khona ithrafikhi, ngcono kusebenza ibhizinisi lakho le-intanethi. Inani lomgwaqo ukubheja kubantu abalungile abaza kumakhasi akho wewebhu ngokuchofoza kumakhasi omphumela we-injini yokusesha (i-SERPs).
Ngencazelo, ithrafikhi yekhwalithi kusho ukubandakanya kuphela lezo zivakashi ezithandekayo kwimikhiqizo noma amasevisi osebenzisana nawo. Ayikho iphuzu lokuheha izivakashi ezivela emhlabeni wonke. Isibonelo, ayikho ithrafikhi yekhwalithi, lapho abantu befuna isofthiwe beza kuwebhusayithi yakho ephathelene nezithelo nemifino, ngoba nje iGoogle yabanikezela ukwenza kanjalo.
Ngokuvamile, ithrafikhi ephilayo cishe yimuphi umgwaqo wemvelo, i. e. , labo ongafanelwe ukukhokha. Ngakho-ke, imiphumela eminingi yosesho ingabonakala ngokuyinhloko ngezikhangisi ezikhokhelwe, cabanga nje ngeqiniso.
Ukuqonda ukuthi yini ukuthuthukisa injini yokusesha, ake sibone ukuthi isebenza kanjani. Ukucacisa okucacile, ngiphakamisa ukuthi ngifake isheke esifushane esetshenziswa ngaso sonke isikhathi njengezisekelo eziyisisekelo sabaqalayo. Ukuba nombukiso jikelele ngezansi, zizwe ukhululekile ukumba kunoma yisiphi isihloko esithile ongase udingeke sibe neseluleko.
Yakha iwebhusayithi nge isakhiwo se-SEO-friendly
Ngaphambi kokungena ngokujulile kulolu daba, kuzodingeka uqinisekise ukuthi amakhasi akho ewebhu akhiwe ngendlela enobungane ukuba kahle-indexed by robots search. Kungakhathaliseki ukuthi usanda kumisa iwebhusayithi entsha, noma nje ufuna ukuxubha okwamanje, isakhiwo se-SEO-friendly siqala ngokukhetha igama le-domain elilungile, enhlanganweni enhle yokuqukethwe kanye namasu wokuzwakalisa isixhumanisi.
Sebenzisa emibhalweni yakho futhi ukhumbule: okuqukethwe kunenkosi
Thatha kalula.Futhi kunezinhlobo eziningi eziguqukayo eziphathelene nalesi sihloko. Kodwa kunezinto ezimbalwa kuphela ozidingayo lapha kakhulu - nje uzizwa unelukuluku ngokucwaninga ngegama elingukhiye, imikhuba ejwayelekile yokudala okuqukethwe kwe-SEO-friendly, kanye nesethi edingekayo yokuhamba ngokukhethekile okusiza izinjini zokusesha (njengo-Google uqobo) "ukuqonda" okuqukethwe kwakho.
Okuyisisekelo esiteshini kanye nezinye izihloko ezihlobene nokuxhumanisa ukwakha
Uma uzizwa uqiniseka ngekhwalithi nokuqukethwe kwe-SEO-friendly, kanye nemikhumbi ehlobene nezobuchwepheshe, wena ukulungele ukuhamba ngokujulile kuwo wonke ama-robot. txt, vele upheqa ngakho. Ngokuphathelene nezihloko zenkimbinkimbi zokwakha isixhumanisi, ngincoma ukuqala kokufunda konke mayelana nombhalo we-anchor, ukuze uthole ukuqonda kangcono inqubo yokuqondisa kabusha. Uma usuqedile, khombisa ukuphequlula amaphuzu amasha, njengokubhula izihambeli, ukuthola izixhumanisi, nokuthi nini ukusebenzisa okungezansi. Uma usuthole konke, uzobe ulungele ukuya kwezinye izihloko ezithuthukile ezifana nokuhlelwa kwezinga lokuguqulwa, i-SEO yendawo nendawo yangaphandle, nokunye okunye Source .